Shiinaha MINI Mashiinka Mashiinka Mashiinka loo yaqaan 'Set-Spring' iyo 'Cookie Cutter Cutter / Mini Geometric Shape Cookie Cutter, Wareeg Mini Mini Cookie Cutter / Qudaar Nooca Dout Khudradda / Warshada Kukiyada Mashiinka Gooyaha & Soosaarayaasha | Transben
[Maaddad tayo sare leh] cookie magaabay ka samaysan tahay 430 ahama, taas oo miridhku u adkaysta, daxalka u adkaysta oo ka cimri dheer birta caadiga ah. BPA-la'aan, dib loo isticmaali karo, adkeysi leh oo aan dheg dheg lahayn, si sahlan loo nadiifin karo, iyo geesaha laaban ayaa saaxiibtinimo leh gacmaha. Fadlan gebi ahaanba qalaji kahor intaadan keydin. [Tayo wanaagsan iyo badbaado] -Bakhtar-goynta buskudku wuxuu ka samaysan yahay birta birta ah ee aan lahayn birta, BPA-ka oo aan lahayn, dib loo isticmaali karo, adkeysi leh oo aan dheg-dheg lahayn [Qaabab kala duwan oo wasakh ah] -Tani waa mid buskud ah / caaryo buskud ah, oo loo isticmaali karo in lagu sameeyo buskud tayo sare leh. Waxaa loo isticmaali karaa sida caaryada canjeelada, iyo sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa in lagu gooyo cajiinka buskudka, nacnac jilicsan, miraha jilicsan, khudaarta, rootiga, ismaris, Cheese, wasakhda caatada ah, ukunta ama farsamada gacanta. Adiga la samee carruurta si aad cuntadaada uga dhigto mid xiiso leh! [Qaab iyo cabir qumman] -Kubi buskudka kuna qaabee qaabab kala duwan. Qalabkan cookie cutter-ka wuxuu ku siinayaa qaabab kala duwan oo ah baraf baraf ah, geedo kirismas ah, ubaxyo, xayawaanno, goobo, xiddigo, fagaarayaal, iyo qalbiyo. [Xulashada ugu wanaagsan ee hadiyadaha] -U qurxi cuntada si aad ugu ekaatid macaan badan. Hab wanaagsan oo loogu dhiirrigeliyo ilmahaaga inuu ka qaybqaato cuntada. Xirmooyinka cufan iyo wax ku ool ah ee goynta miraha iyo khudradda ayaa xulasho weyn u noqon doonta hadiyadaha iyo qalab weyn oo lagu iftiimiyo qurxinta is biirsaday.
Hore: 26 PCS Alphabet Cookie Cut for Kids, Fondant, Sandwich, Cake, Qudaar khudradeed DIY Cookie Biskut Cutter Set qurxinta Qalabka ahama waraaqaha dubista wasakhda
Xiga: Koob daboolka u eg-silicon